Soo-saareyaasha Mashiinka Summadaynta tooska ah & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshada Makiinada Calaamadeynta Tooska ah ee Shiinaha
FK803 waxay ku habboon tahay calaamadaynta alaabta cylindrical iyo conical ee tilmaamo kala duwan, sida dhalooyinka wareegsan ee qurxinta, dhalooyinka khamriga cas, dhalooyinka daawada, dhalooyinka kootada, caagagga caaga ah, calaamadaynta dhalada wareegsan ee PET, calaamadaynta dhalada caaga ah, gasacadaha cuntada, iwm. Calaamadaynta dhalada.
Mashiinka calaamadaynta FK803 waxay xaqiijin kartaa calaamadaynta goobada buuxda iyo calaamadaynta goobabada badhkeed, ama calaamadaynta labajibbaaran ee hore iyo dambe ee alaabta.Kala fogaanshaha u dhexeeya calaamadaha hore iyo dambe waa la hagaajin karaa, habka hagaajinta sidoo kale waa mid aad u fudud.Waxaa si weyn loogu isticmaalaa calaamadaynta dhalada wareegsan ee cuntada, alaabta la isku qurxiyo, samaynta khamriga, daawada, cabitaanka, warshadaha kiimikada iyo warshadaha kale, waxayna xaqiijin kartaa calaamadaynta semi-wareegga.
FK807 Toos ah Mashiinka Calaamadaynta Dhalada Wareega Horizontal
FK807 waxay ku habboon tahay in lagu calaamadiyo alaabooyin kala duwan oo yaryar oo cylindrical ah iyo kuwa koofiya ah, sida dhalooyinka wareegsan ee qurxinta, dhalooyinka daawada yaryar, dhalooyinka caagga ah, dhalooyinka wareegga PET 502 calaamadaynta dhalada xabagta, calaamadinta dhalada dareeraha afka, calaamadaynta qalin-haystaha, calaamadaynta lipstick, iyo kuwa kale oo yaryar dhalooyinka wareegsan iwm. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa calaamadaynta dhalada wareegsan ee cuntada, waxyaalaha la isku qurxiyo, samaynta khamriga, daawada, cabitaanka, warshadaha kiimikada iyo warshadaha kale, waxayna xaqiijin kartaa calaamadaynta daboolka alaabta oo buuxda.
Qalabka Wareega/Taper ee Xawaaraha Sare ee Mobtarka FK606
FK606 Mashiinka Calaamadaynta Dhalada Xawaaraha Sarreya ee Wareega/Taper wuxuu ku habboon yahay dhalada wareegsan, qasaca, baaldiga, calaamadaynta weelka.
Hawlgalka fudud, Xawaaraha sarreeya, Mashiinnada waxay qaataan meel aad u yar, si fudud ayaa loo qaadi karaa oo u socon karaa wakhti kasta.
Operation, Kaliya dhagsii badhanka qaab otomaatig ah oo ku yaal shaashadda taabashada, ka dibna badeecadaha ku dheji gudbiyaha mid mid, markaa uma baahnid inaad sameyso wax kale calaamadinta waa la dhammaystiri doonaa.
Waxaa lagu hagaajin karaa calaamadaynta calaamadda meel gaar ah oo dhalada ah, waxay gaari kartaa dabool buuxa ee calaamadaynta alaabta, Marka la barbardhigo FK606, way dhakhso badan tahay laakiin waxay ka maqan tahay calaamadaynta meelaynta iyo shaqada calaamadaynta alaabta hore iyo dambe.Si ballaaran loo isticmaalo baakadaha, cuntada, cabitaanka, kiimikooyinka maalinlaha ah, daawada, qurxinta iyo warshadaha kale.
FK911 mashiinka calaamadaynta laba-geesoodka ah ee tooska ah waxay ku habboon tahay calaamadaynta hal-dhinac iyo laba-geesoodka ah ee dhalooyinka fidsan, dhalooyinka wareegsan iyo dhalooyinka labajibbaaran, sida shaambada dhalada siman, dhalooyinka saliidda saliidda, nadiifiyaha gacmaha dhalooyinka wareegsan, iwm. ku lifaaqan isla mar ahaantaana, calaamado labanlaab ah ayaa hagaajiya waxtarka wax soo saarka, calaamadaynta saxda ah ee saxda ah, waxay muujisaa tayada wanaagsan ee alaabta, waxayna wanaajisaa tartanka.Waxaa si weyn looga isticmaalaa maalinlaha ah kiimikooyinka, isqurxinta, petrochemical, farmashiyaha iyo warshadaha kale.